Buy Amara Coffee Soap (2,500Ks) in မရမ်းကုန်း on ipivi.com
Amara Coffee Soap
ရောင်းချသူ: Hlahla Win
ကြည့်သူအရေအတွက်: 69 (+ 1 )
Amara coffee facial mask soap ​လေး
တချို့ သူ​တွေမှာ သုံးသုံးချင်း အဖု​တွေ ထွက်​လာတယ်​ . မတည့်​ဘူးတဲ့ . .
နနွင်း​ကြောင့်​​ပေါ့ . နနွင်းက အပူ​လေ . . မျက်​နှာ​ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အပူ​တွေ အကုန်​ ကန်​ထွက်​လာတာ . . .ဆက်​မသုံး၇ဲတဲ့သူ​တွေက ၇ပ်​ပစ်​ ကြတယ်​ . တချို့က ဆက်​သုံးတယ်​ . .
ဆက်​တိုက်​သုံးစွဲသူ​တွေ ဘာ​တွေ ထူးခြားလာလဲ . . .မျက်​နှာအသားအေ၇ ကြည်​လင်​ ၀င်းစို လာတယ်​ .အသားအေ၇ နဂိုထက်​ နူးညံ့ဝင်းမွတ်​လာတယ်​ . ၀က်​ခြံ အမဲစက်​ ​နေ​လောင်​ကွက်​ ဆားဝက်​ခြံ ​တွေ ​သက်​သာတယ်​ . .
အထူးခြားဆုံးက မိတ်​ကပ်​ အဆီနဲ့ အညစ်​အ​ကြေး​တွေ က မျက်​နှာတခါသစ်​ယုံနဲ့ ​ပြောင်​စင်​​ပြီး ကြည်​လင်​သွား​တော့ . လူကြီး​တွေနဲ့ ​ယောကျာ်း​လေး​တွေ ပါ အထူး ကြိုက်​နှစ်​သက်​လာကြတယ်​ .
မျက်​နှာက အဆီနဲ့ အညစ်​​ကြေး အ၇မ်းစင်​ကြယ်​သွား​ပေမဲ့ ဘယ်​​လောက်​သုံးသုံး ​ချွေး​ပေါက်​​တွေ ကျယ်​မလာတာက coffee soap ​လေး၇ဲ့ အားသာချက်​ .
တ​နေ့တခြား.မျက်​နှာက ၀င်းမွတ်​တင်း၇င်း ကြည်​လင်​လာပြီး မိတ်​ကပ်​သနပ်​ခါးလိမ်း၇ အသားတက်​လာ​တော့ မိန်းက​လေးတိုင်းအသဲစွဲ မရှိမဖြစ်​ ဖြစ်​လာတာ​ပေါ့ . ♥♥
မသုံး၇ဲဘူး ​ကြောက်​တယ်​ဆိုသူ​တွေ . .ဓာတု​ဆေး​တွေဆို တိ၇စ္ဆာန်​​တွေ လူထက်​ပိုသိတယ်​ အနားမကပ်​ဘုး .ဒီဆပ်​ပြာ​လေးကို သုံးစွဲသူက​တော့ ​သေချာသိမ်း၇တယ်​ .ကြွက်​ချီလို့ ပု၇ွက်​ဆိတ်​ တက်​လို့တဲ့.. .ပါးစပ်​ထဲ.၀င်​၇င်​ ချိုတယ်​ ဆိုတဲ့ သူ​တောင်​ရှိ​သေး . . ဓာတု​ဆေးဝါးအနည်းဆုံး မျက်​နှာသစ်​ . မျက်​နှာအသားအေ၇ကို ​ပေါင်းတင်​ထားသလို နူးညံစို​ပြေတင်း၇င်းကြည်​လင်​၀င်းမွတ်​​နေ​စေဖို့
AMARA COFFEE facial mask ​လေးကို သုံးစွဲကြပါလို့ ♥♥
မှာယူလိုပါက 09420030255 viber or chat box မှ
အိမ်မှာလာရောက်ဝယ်ယူလိုပါက သမိုင်း၂လမ်း ၁ရပ်ကွက် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပါရှင့်
Nudv Stocking Spray
Genive မျက်ခုံးထူ၊ မျက်ခုံးပေါက်...
အမည်: Amara Coffee Soap